မောင်းသူမဲ့ကား မှစ. Jetpack မှ - သတင်း Rule
မောင်းသူမဲ့ကား မှစ. Jetpack မှ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “မောင်းသူမဲ့ကား မှစ. Jetpack မှ: အကူးအပြောင်း reshaping နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်သူများတွေ့ဆုံရန်” အန်ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းအားဖြင့်ရေးသားခဲ့, theguardian.com စနေနေ့ 14 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 14.13 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
နယူးဇီလန်အခြေစိုက်မာတင်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသမားရိုးကျမဟုတ်သောပျံစက်ဖြစ်ပါတယ်: တစ်သိပ္ပံဝတ္ထုရုပ်ရှင်ကနေကျားကန်တူထင်ရစေခြင်းငှါ, တစ်ဦး Jetpack, အဲဒါကိုစီးပွားဖြစ်ဖို့လမ်းအပေါ်ကောင်းစွာင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့မဟုတ်ကြ.
အောက်တိုဘာလအတွက်, နယူးဇီလန်ရဲ့အရပ်ဘက်လေကြောင်းအခွင့်အာဏာကုမ္ပဏီရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံရှင်းလင်း 12 လိုက်ပါလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်မော်ဒယ် Jetpack. အဆိုပါပန်ကာ-propelled Jetpack, ပဲရစ် Air လေကြောင်းလိုင်း Show မှာဇွန်လမှာပြသကြသောအခါ, နီးပါးပျံဝဲနိုင် 1,000 မီတာနှင့်နာရီဝက်အထိပျံသန်း. အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ Jetpack တစ်ချိန်ချိန်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်စီးပွားရေးအရရရှိနိုငျဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည် 2016.
အဆိုပါ Jetpack ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြီးတွေစိတ်ကူးများ၏ဥပမာတစ်ခုနှင့်ကြီးမားသောကစားနည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-အာရုံစူးစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖြတ်ပြီးလုပ်ခံရ, မာတင်လေယာဉ်များကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများကဖြစ်နိုင်သမျှအရာ၏အဝေးအနားအပြိုင်အဆိုင်ရာ. ကျနော်တို့ကားတွေ "ရေရှည်မှာအပြည့်အဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ" ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါတစ်ဦးအချိန်ရဲ့ချောက်ကမ်းပါးပေါ်မှာအသက်ရှင်, တက်စလာ CEO ဖြစ်သူ Elon Musk သည်နှင့်အညီ. လျှပ်စစ်ကားရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူဖုန်းခေါ်ဒီလထဲမှာ, သူသည်အရင်ပေးတော် 15 သို့ 20 နှစ်ပေါင်း.
မိမိတို့အအလားတူစိတ်ကူးအကြံအစည်နှင့်အတူအခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များများများရှိပါတယ်, စေအာကာသယာဉ်ကနေ suborbital ပျံသန်းမှု သို့ ချွတ်ယူကြောင်းလေယာဉ်နှင့်ဒေါင်လိုက်မြေယာ.
The Guardian ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ်ဦးတည်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးသဘောအရဤဆန်းသစ်တီထွင်သူများအနည်းငယ်ထွက်ရောက်ရှိ. ကျနော်တို့ကိုသူတို့မွေးရာပါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပုံကိုမေးလျှင်သူတို့ကပထမဦးဆုံးဌာန၌ဤအာကာသသို့ရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်. အဘယျသို့အကြှနျုပျတို့တှေ့ရသောတစ်ဦး Jetpack အပေါ် strapping ဘီးနောက်ကွယ်မှရတဲ့အဖြစ်ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အနီးအနာဂတျအတှကျအားကြီးသောအကောင်းမြင်ဖြစ်ပါသည်.
မာတင်လေယာဉ်လာမည့်နှစ်တွင်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၎င်း၏ Jetpack ဖွင့်ဖို့စီစဉ်. အဆိုပါကုမ္ပဏီကဒီဆန္ဒပြပွဲကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ဂါးဒီးယန်းထောက်ပံ့.
မာတင်လေယာဉ် ရဲ့ CEO ကပတေရု Coker ကသူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်အံ့ဖွယ်မဖြစ်နိုင်သောရူပါရုံကိုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခံရဖို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်သိတယ်.
"ဒါဟာကုမ္ပဏီရဲ့ join ဖို့ကျွန်မကိုဖျောင်းဖျသောငါ၏သားခဲ့,"Coker ကပြောပါတယ်, စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်း. "ကျနော်တို့အားလပ်ရက်အပေါ်ခဲ့ကြသည်, ငါ၏အသား, အဘယ်သူသည်လန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးဖက်ရှင်စတိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်, ကွက်တိထောက်ပြ: '' အဘယ်ကြောင့်သင်နောက်ဆုံးရာစုအတွင်းလေကြောင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့မလိုမယ်လို့?" '
စျေးကွက်ထဲကသူတို့ရဲ့ Jetpack ရရှိရန်အလျင်, 2015 ကုမ္ပဏီအများအတွက် defining ယခုနှစ်တစ်ခုခုခဲ့, သောမကြာသေးမီလများအတွင်းသဘောတူညီချက်များတက်သော့ခတ်ခဲ့, မိတ်ဖက်များနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်ဒီဇိုင်းကိုပယ်ခြင်း. ဒါဟာတိုးချဲ့ခဲ့သည် 53 အနှံ့ကလူ 13 လူမျိုးစုများနှင့်ဟောင်ကောင်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်.
Jetpack ၏အနာဂတ်ဖော်ပြ, Coker တစ်ဦးက "မိုဃ်းကောင်းကင်၌အဝေးပြေးလမ်းမ" သို့မဟုတ်တစ်ဦး "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စတုတ္ထရှုထောင်" မျှော်မှန်း, ပျမ်းမျှလူတဦးအလျင်အမြန်တယောက်ကိုတယောက်အချက်မှသွားလာနိုင်သောနေရာ.
ဒီကပဲတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Jetpack ဖြစ်ခြင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်နှင့်တူ "ကျနော်တို့လျင်မြန်စွာတစ်ခုခုပတ်လည် utility ကိုသဘောပေါက်,"Coker ကပြောပါတယ်, ဟောင်းတစ်ဦး Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှအမှုဆောင်. "ကျနော်တို့ကလည်းစီးပွားဖြစ်ကဏ္ဍတွင်အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင် - ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအတွက်, သတ္တုတွင်းနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုး။ "
တစ်ပျံသန်း Jetpack ၏အယူအဆအလားအလာမိတ်ဖက်များနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ဝေးလွန်းသံသယရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးတံတားမှတစ်ခက်ရောင်းကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ,. သို့သော် Coker ့အရာကိုမွငျလြှငျရောင်းချမှု clinch ကိုကူညီနိုင်ကပြောပါတယ်. သူ့ကုမ္ပဏီအယူအဆ၏ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုပြသထားတယ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံတင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ, Coker က "ငါသည်ချက်ခြင်းဆိခဲ့သောအခါငါခဲ့သောအိပ်မက်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း" ကပြောပါတယ်. အချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်, သူကပြောပါတယ်, ဝယ်-အတွက်လွယ်ကူသောတစိတ်တပိုင်းကြောင်းရတဲ့.
ဒါဟာလိုအပ်ဓာတ်လှေကားများကိုသောမွေးရာပါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်ပါဝငျသောစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်အတူပါလာသည်ဟုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်နှစ်ဦးပရိသတ်တွေ surmounting ထက်ဆက်ဆက်လျော့နည်းရှုပ်ထွေးင်.
"သင်ကလည်ပတ်ပုံကို၏ဒဿနအားဖြင့်လူကိုယူတဲ့အခါမှာ - အားလုံးကောင်းသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့တူ, ကရိုးရှင်းပြီးကြည့်တဲ့ရှုပျထှေးပေးပို့င် - သူတို့ကရ,"Coker ကပြောပါတယ်. "သူတို့ကက၏ utility ကိုရ, ကျွန်တော်သွားတိုင်းအချိန်တစ်နေရာရာမှာဆက်, တစ်စုံတစ်ဦးကလည်းအသုံးပြုအချို့သောကွဲပြားခြားနားသောလမ်းနှင့်အတူတက်လာပါတယ်။ "
အဆိုပါ Next ကိုအယူအဆအသီးအသီးအခြားစကားပြောကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသီးတောင့်ကပါဝငျ. စက်မှုဒီဇိုင်နာ Tommaso Gecchelin ဒီက rendering နှင့်အတူဂါးဒီးယန်းထောက်ပံ့.
အ Jetpack တူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတီထွင်မှုအခြားပုံစံများအမျိုးမျိုးအပေါ်ယူပြီးကြသည် - အချို့သော incremental, အချို့အုတ်မြစ်ချ.
မောင်းသူမဲ့ကားနည်းပညာကိုယခုအချိန်တွင်မှာအပူဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်, Mercedes-Benz ဖို့ Ford ကားမှထုတ်လုပ်သူမောင်းသူမဲ့နည်းပညာကိုပြဇာတ်အောင်နှင့်အတူ. sensors နှင့်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးစွမ်းရည်အ Next ကိုများအတွက်အမေရိက၏ပြန်လည်စဉ်းစားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Intelligent သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ themes များအကြားလည်းရှိကြ၏ 30 ဝါရှင်တန်ဒီစီအတွက်အောက်တိုဘာလအတွက်အနှစ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး.
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆီသို့တွန်းအားပေးအများအပြားလက်ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိုးဖောက်၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်. ပြန်လွတ်လာတက်စလာ၏တတိယသုံးလပတ်ရှယ်ယာရှင်စာ၌3နိုဝင်ဘာလ, ကုမ္ပဏီအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၎င်းတို့၏မော်တော်ကားနီးပါး 250m မိုင်ဒီလေးပုံတပုံကိုနှင်, ယနေ့အထိနီးပါး 1.5bn မိုင်စုစုပေါင်းသည်။ "တက်စလာ, ထိုစာအပေါ်တတ်, "ငါတို့သည်ငါတို့၏မော်တော်ကားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မောင်းနှင်ခဲ့ကြပုံကိုဝေးသငျသညျပွောပွနိုငျသောအခါ" နေ့ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်.
ထိုသို့သောအနာဂတ်အီတလီအင်ဂျင်နီယာနှင့်စက်မှုဒီဇိုင်နာ Tommaso Gecchelin တစ် foregone နိဂုံးဖြစ်ပါတယ်. သူတောင်းဆိုင်အတွက် modular အယူအဆထွက် sketched င် နောက်တစ်ခု ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ပါကအဖြစ် ချိတ်ဆက်. နှင့်အခြားသီးတောင့်မှ disconnect နိုငျသောလျှပ်စစ်တောငျ့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ features, သေးငယ်တဲ့စတင်ချဲ့ထွင်ရန်ကြီးပွားနိုင်သောသူအချို့အနာဂတ်ရထားနဲ့တူ, အကော်ဒီယန်စတိုင်.
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာနှင့်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ် အခြေခံ. … အနာဂတျမှာကျနော်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစျေးကွက်၏တစ်ဦးတော်လှန်ရေး segment မြင်ရပါလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးရဲ့,"Gecchelin ကပြောပါတယ်. "တစ်ဘက်ခြမ်းတွင်, လူ့မောင်းနှင်ကားများစက်တပ်ကားများထွန်းနှင့်အတူမြင်းများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်အားကစားကားထင်ရှားသောဖြစ်လာလိမ့်မည်, မြို့ကားများလျော့နည်းလိုချင်သောဖြစ်လာလိမ့်မည်နေစဉ်, တစ်ဦးထက်ပိုအသုံးဝင်သောနှင့်ပြည့်စုံပေးမည်အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကိုပိုမိုအာကာသပေးခြင်း … ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အတှေ့အကွုံခရီးသည်။ "
သူ့ခရီးသည်ပုံစံထက်ပိုပြီးအဖြစ်သူ၏ Next ကိုအယူအဆမျှော်မှန်း. ဒါဟာဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်း system အဖြစ်နှစ်ဆနိုင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖောက်သည်တစ်ဦးရဲ့အိမျမှကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ငှားရမ်းသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မိမိတို့အသီးတောင့်သူတို့နှင့်မပို့နှင့်အတူ.
Gecchelin သူအလုပ် "ပတ်ပတ်လည် oriented အဖြေတစ်ခုစဉ်းစားစတင်ခဲ့ပြောပါတယ်, အပန်းဖြေခြင်းနှင့် On-demand န်ဆောင်မှု [မည့်အစား] အသွားအလာ optimization ". အခုအချိန်မှာ, သူတစ်ဦးပထမဦးဆုံးသင်္ဘောများထုတ်လုပ်အစစ်အမှန်လောကရှိအယူအဆကိုသရုပ်ပြဖို့ခွင့်ပြုမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုရှာဖွေနေင်. သူကလက်ရှိအလားအလာမိတ်ဖက်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဂျာမန်မြို့မြို့နှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများင်.
"ဒီစက်ရုပ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းနည်းပညာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ကားအဘယ်သို့,"သူကပြောပါတယ်. "Intellegence နှင့်ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်မောင်းက Next ကိုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်အတိအကျတူယာဉ်များကိုပူးပေါင်းရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ချေသော့ဖွင့်။ "
နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများထက်အခြား, ထိုကဲ့သို့သောဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏လမ်းထဲမှာရပ်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုဖြစ်ပါသည်. ယခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်တွင်ရောင်းချခဲ့ရခြင်းနှင့်ကားလမ်းထိပါလိမ့်မည်နီးပါး 17m အသစ်မော်တော်ယာဉ် - မကြာမီလာမည့်တ point ကနေရတဲ့တစ်အစွန်းရောက်နည်းလမ်းသစ်သည်အစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းမော်တော်ယာဉ်.
Elio Motors ကသုံးဘီးတပ်ယာဉ်နှင့်အတူအကားတိုးတက်လာဖို့လုပ်ဆောင်နေသည်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကဲ့သို့အယူအဆ. အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ဤမြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုတွေနဲ့ဂါးဒီးယန်းထောက်ပံ့.
ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုနဲ့အညီဆန်းသစ်တီထွင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်, ပေါလုက Elio အိုင်ပက်နဲ့တူတစ်ခုခုအားမိမိကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မော်တော်ယာဉ်များ၏ utility ကိုဘောင်ခတ်. တက်ဘလက်တစ်ဦးကို PC လူသတ်သမားဖြစ်သက်သေပြပေမယ့်အစား devices များအသုံးပြုသူများသည် '' လက်ရှိအကွာအဝေးပြည့်စုံစေမမူတူညီသောလမ်းအတွက်, Elio ဖောက်သည်တစ်ဦးရဲ့ကားဂိုဒေါင်၏အိုင်ပက်နဲ့တူတစ်ခုခုအဖြစ်သူ၏ကုမ္ပဏီ၏မော်တော်ယာဉ်ကိုမြင်. ဖီးနစ်-based Elio Motors က ယင်း၏သုံးဘီးယခုအမိန့်ကိုယူပြီးဖြစ်ပါသည်, ရရှိသွားတဲ့ကြောင်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ် 84 ဒါကြောင့်တစ်ဦးတတ်နိုင်နှင့်အတူလာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိဖို့စီစဉ်ထားသည့်ဂါလံနှင့်အရာမှမိုင် $6,800 စျေးနှုန်းကတ်ပြား.
"ငါသည်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ဖို့ရှိပါတယ်ထင်တယ်,"Elio ပြောပါတယ်, အဘယ်သူ၏ကုမ္ပဏီပြီးသားထက်ပိုရှိပါတယ် 47,000 ၎င်း၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု. "ကျွန်မအကြောင်းကိုတစ်နှစ်နှင့်ခြောက်လနယူးယောက်မြို့တှငျနထေိုငျ, ငါအဲဒီမှာမြေအောက်ရထားစနစ်ကခစျြတဲ့. သင်သည်ထိုအရွယ်အစားသည်လူဦးရေများလာတဲ့အခါ, အစုလိုက်အပြုံလိုက်အကူးအပြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်.
"တိုင်းပြည်၏ကျန်သည်, ကျနော်တို့သိသာဖြစ်စေအပေါငျးတို့သဆင်ခြေဖုံးဖြိုချခြင်းနှင့်ကြီးမားသောလူဦးရေစင်တာများဖန်တီးသို့မဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရှိရာမြို့လယ်မှမြို့ဆင်ခြေဖုံးကနေရဖို့ကပိုပြီးထိရောက်လမ်းထွက်တွက်ဆဖို့လိုပါတယ်။ "
Elio ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်ကုန်နည်းပညာပိုင်းတစ်ဦးဆိုင်ကယ်အဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အာဏာကိုပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူကြွလာ, လေအေးပေးစနစ်, လေအိတ်နှင့်အာဏာသော့ခတ်တံခါးများ, အားလုံးတစ်ဦးပူးတွဲခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်. အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်များ Shreveport အတွက် Elio ကထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်, Louisiana, ဟောင်းတစ်ဦး General Motors ကထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှာ.
"ဒါဟာတန်ဖိုးနည်း high-မိုင်အကွာအဝေးဖြစ်တယ်ရဲ့ - ကအလုပ်သူတို့၏အမျိုးအနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်တယ်ရဲ့,"သူကပြောပါတယ်. "ဒီတစ်ခု 'နဲ့' ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, မ 'သို့မဟုတ်' 'ရွေးချယ်မှု. ဒီတော့အယူအဆသင်ဝယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ကြီးမားသောမော်တော်ယာဉ်ကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သညျလညျးတစ်ခု Elio ရှိ. သငျသညျအလုပျမှနျ Elio မောင်းထုတ်, နှင့်စနေနေ့ကသင်သည်သင်၏ SUV ကားထွက်ယူပါ။ "
Elio သူသည်မိမိကုမ္ပဏီကိုဖွင့်များ၏စီးပွားရေးထိတ်လန့်မှတဆင့်နထေိုငျပွီးနောကျသူ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တည်ဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် 2008 - ထိုအရောင်း-based ကားတစ်စီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ဦးချင်းစီ၏မကျြနှာမဖြစ်ကြောင်း "gamesmanship" ၏တဦးတည်းနှင့်ဘောဂဗေဒကြောင်း, မိမိယုံကြည်ချက်အပြင်. သူ Elio Motors ကစတင်အကြောင်းကို set အဖြစ်သူလျင်မြန်စွာသင်ယူအရာတစျခုမှာအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုအသစ်တခုကားတစ်စီးကုမ္ပဏီစတင်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေအဖြစ်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အခက်အခဲနှင့်ဝသကဲ့သို့စရာတွေဖြစ်ပါတယ်.
"ကျွန်မသတိထားမိပါတယ်အရာအားလုံးထက်ထက်ဒီအာကာသအတွင်း entry ကိုပိုပြီးအတားအဆီးရှိပါတယ်,"Elio ပြောပါတယ်. "သင်ဆွေးနွေးထဲကတက်စလာယူလိုလျှင်, တစ်စုံတစ်ယောက်နေဆဲ running ရဲ့ America မှာအောင်မြင်သောကားတစ်စီးကုမ္ပဏီ created နောက်ဆုံးသောကာလ " 1925. အတွက် Walter P ကို ​​Chrysler ခဲ့သည်
နောက်ကျောစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကာလအတွင်း, သောအခါ "ဆီစျေးနှုန်းခေါင်မိုးကတဆင့်သွားခဲ့ပါတယ်", Elio သူက "စည်းစိမ်ဒီတိုင်းပြည်ထဲကလောင်းကိုမြင်လျှင်ချွတ် pissed" ဖြစ်လာတယ်ပြောပါတယ်.
"ငါကလည်း, ငါသည်တညျဆောကျခငျြ $5,000 ရရှိသွားတဲ့ကြောင်းကားတစ်စီး 65 ဂါလံမိုင်,"ဟုသူကပြန်ပြောပြသည်. "ငါ back up လုပ်ထားဖို့အဘယ်သူမျှမဒေတာရှိခဲ့. ကျနော်တို့ပြဿနာစတင်လုပ်ကိုင်. ငါအခုထိစဉ်းစား $5,000 ကားတစ်စီးဟာ sexy အရေအတွက်ကိုဖြစ်ရပြီလို. ဒါပေမယ့်ဗိသုကာဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ခဲ့ပြီးကျနော်တို့ပေးသွင်းနှင့်အတူစည်းဝေးခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းရတဲ့စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်, ကြှနျုပျတို့သညျဤလူမျိုးသည်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုသော features တွေအများကြီးရှိသည်မဟုတ်နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ "
"ငါသည်အကြီးမားဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်ကျိုးသည်ထင်,"Elio ပြောပါတယ်, သူကလူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကသူကအပေါ်သူ၏နာမနှင့်အတူတစ်ကားကိုကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်အကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်သူကပြောပါတယ်. "ကားတစ်စီး၏ဝယ်ယူထိုကဲ့သို့သောကြီးမားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, ငါတို့သည်အရှိကိုအဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည် $6,800 ဂဏန်း. သင်လိုချင်တာတွေကိုသိနှင့်မျှမတို့ငွေကြေးပြဿနာရှိတယ်လိုလျှင်, ကမော်တော်ယာဉ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါသငျသညျငါးနာရီမယူသင့်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ XTI လေယာဉ် concept ကိုဒေါင်လိုက် takeoff နှင့်ဆင်းသက် features, လေဆိပ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည့်, တည်ထောင်သူဒါဝိဒ်သည် Brody အညီ. XTI ဒီထုတ်ကုန်တင်ဆက်မှုနှင့်အတူဂါးဒီးယန်းပေးအပ်.
Elio သူ့ကုမ္ပဏီစတင်ယခုနှစ်အပြီး, Denver-based ဒါဝိဒ်သည် Brody မိမိလမ်းကြောင်းကိုချချွတ် setting ခဲ့သည်. သူ၏အဖွင့်ချိန်မှာ, XTI လေယာဉ်, ပုံမှန်ခရီးသည်ဂျက်လေယာဉ်နဲ့တူပျံတဲ့ခြောက်ထိုင်ခုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂျက်များအတွက် concept ကိုတီထွင်ထားပါတယ်, သို့သော်လှည့်ကွက်နှင့်အတူ - စပယ်ယူပြီးဒေါင်လိုက်နိုင်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ TriFan 600 ဂျက်ဒေါင်လိုက် liftoff များအတွက်သုံးပြွန်ပရိတ်သတ်များကိုအသုံးပြုသည်. takeoff ပြီးနောက်စက္ကန့်, နှစ်ခုတောင်ပံပရိတ်သတ်တွေအလျားလိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှပြောင်းရွှေ့ဖို့ otate ရှေ့ဆက် r. တစ်ဦးကပန်ကာအဆိုပါယာဉ်ကိုယ်ထည်ပိတ်ဖို့ရန်တပ်ဆင်ထား. ဘယ်အချိန်မှာကဆင်းသက်ဖို့အချိန်လာ, အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းပြန်ထွက်ကစား.
XTI လေယာဉ်ကိုပထမဆုံးတာဝေးပစ်ဒေါင်လိုက်-takeoff စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ပျံဖြစ်လိမ့်မည်မလုပ်ပဲ. အခြားကုမ္ပဏီများလည်းဒေါင်လိုက်-takeoff နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း. ဇွန်လအတွက်, ဘိုးအင်းသရုပ်ပြ တစ်ဦး Dreamliner ၏အနီး-ဒေါင်လိုက် takeoff.
မိမိသားစဉ်အခါ Brody ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာအကြောင်းကိုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမီးပွားတယ် 10 အသက်အိမ်ပြန်တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း၏ပြဿနာကိုဆောင်ခဲ့. သူကဒေါင်လိုက်တစ်ဦးကိုချွတ်ယူနိုင်ကြောင်းအသေးစားဂျက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားနေတစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အကြောင်းကိုဆောင်းပါးနှင့်မြေယာပါဝင်သည်ပြန်ပြောပြသည်.
"ငါ့ကိုအဲဒီစဉ်းစားတယ်,"Brody ကပြောပါတယ်. "သင်ပစ္စည်းများတိုးတက်လာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတော်ကြာကျော်ဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယ်အရာကိုကြည့်ပါလျှင်: ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ပါးပစ္စည်းများရှိသည်နှင့်ဂျက်အင်ဂျင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများ. ဤသည်ဂျက်နှစ်ခု turboshaft အင်ဂျင်ရှိပါတယ်, ပေါင်းကွန်ပျူတာနည်းပညာတိုးတက်မှုအများကြီးပိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးလေယာဉ်၏အဖြစ်တိုက်မှုရှောင်ရှားခြင်းအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ. အဆိုပါမောင်းသူမဲ့မော်တော်ကားနည်းပညာ၏အချို့ဖြစ်ကောင်းအနာဂတ်မှာ၏လေယာဉ်ထဲမှာတစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍပါလိမ့်မယ်။ "
Brody အလယ်အလတ်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်တစ်စင်း၏အနာဂတ်ဒေါင်လိုက် takeoff နှင့်ဆင်းသက်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေ. အဆိုပါနည်းပညာကိုရှည်လျားပြေးလမ်းနှင့်အတူလေဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ဖယ်ရှားပစ်မယ်လို့. သင့်ရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးမပါလျှင်၎င်းသည်လည်းမနီးမဝေးသင့်အိမ်ကနေသင်တို့ကိုကောက်ကြောင်းလေကြောင်းတက္ကစီန်ဆောင်မှုအတွက်လက်လှမ်း ပို. ပင်ပျံစေနိုင်ခြင်း.
XCOR Lynx suborbital ယာဉ်များနေရာအစွန်းမှတိုတောင်းခရီးစဉ်အပေါ်ခရီးသည်ယူရည်ရွယ်. အဆိုပါကုမ္ပဏီကဒီပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကိုတင်ဆက်မှုနှင့်အတူဂါးဒီးယန်းပေးအပ်.
တစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အဆုံးစွန်ရှေ့တန်း, ဟုတ်ပါတယ်, ဤလောက၏အထဲကဖြစ်ပါတယ်. ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် XCOR လေကြောင်း suborbital ယာဉ်များ၎င်း၏ Lynx စီးရီးအပေါ်ပျံသန်းမှုများအတွက်လက်မှတ်များရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်, တက်မယ့်အာကာသခရီးစဉ်အပေါ်ခရီးသည်နှင့်သယ်ဆောင်မှုဝန်ချိန်ယူပါလိမ့်မယ်အရာ 330,000 တစ်နာရီထက်လျော့နည်းကြာခြေ.
လေယာဉ်မှူးမှတပါးယင်းခရီးပေါ်တွင်သာသည်အခြားခရီးသည် - ခရီးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခရီးစဉ်အပေါ် Co-လေယာဉ်မှူးဖြစ်လိမ့်မည်. ဒီအတိုင်းတော့, သူတို့တစ်တွေ "ခေါ်ဆိုခနိမိတ်" ပေးထားပါလိမ့်မယ်များနှင့်အာကာသ၏ကျယ်ပြန်အမြင်ရရှိသော Lynx ယာဉ်မြတ်သောအမှတဆင့်အာကာသကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်.
အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ရေနံဆီနှင့်အရည်အောက်စီဂျင်အပေါ်ကို run ကြောင်းပြန်သုံးနိုင်သောဒုံးပျံအင်ဂျင်စွမ်းအားဖြင့်နေသည်.
"ကျနော်တို့ XCOR မှာဖွံ့ဖြိုးပြီးင့်အရာကိုအဓိကမှာအပြည့်အဝပြန်လည် အသုံးပြု. ရသောဒုံးပျံအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်,"အဖွဲ့ဝင် Michiel Mol ဘုတ်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်. "ဒါဟာအံ့မခန်းမထင်စေခြင်းငှါ, သို့သော်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်. တဦးတည်းအချိန်အသုံးပြုမှုကိုသာရှိသေး၏ထွက်သည်အခြားဒုံးပျံ. ကျနော်တို့ချက်ချင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မခေါ်အဘယျသို့ရှိ. ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်ပျံသန်းနိုင်သည်, နှိမ့်ချမထိနဲ့ပေါ်သွားပါ။ "
ဒီအတိုင်းတော့, အဆိုပါ Lynx တန်ဆာကိုတတ်နိုင်သမျှ, သူကပြောပါတယ်, အာကာသ၏နယ်စပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခရီးသည်ယူ. XCOR တစ်ချိန်ချိန်လာမယ့်နွေရာသီစမ်းသပ်ပျံသန်းမှုစတင်နှင့်ခြောက်လမှစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသို့သူတို့ကိုငါချပြီးမျှော်မှန်း 12 သောနောက်လအတွင်း, စီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေစတင်နှင့်အတူ 2017.
အဆိုပါကုမ္ပဏီပြီးသားအနည်းငယ်တရာလက်မှတ်တွေရောင်းချပြီ, အများအားဖြင့်အာကာသများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသည်သောစားသုံးသူမှ. (အဘယ်သူဖြုန်းဖို့ပိုက်ဆံရှိ: လက်မှတ်တွေများမှာ $100,000 လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ဦးလျှင်။)
"ကျနော်တို့ကအာကာသမှဖြစ်မယ့်သူကိုတိုင်းအာကာသယာဉ်မှူးကိုပြန်ရောက်လာပြီတဲ့ဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့အတှေ့အကွုံခဲ့ဘဲလျက်ကြည့်ရှု,"Mol ပြောပါတယ်. "သင်ထွက်ရှိအာကာသ၏ထူထပ်နေပြီးတာနဲ့, တောက်ပတဲ့အစိမ်းရောင်အလင်းရောင်ကြောင့်န်းကျင်လေထု၏အလွန်သေးငယ်သောအလွှာနှင့်အတူဤအသေးစားအပြာရောင်ဂြိုဟ်မှာရှာဖွေနေ, ဒါကြောင့်ပြင်ပကနေဒါအားနည်းချက်ကြည့်. ဒါဟာသင်ကမ္ဘာမြေကိုယ်တိုင်ကတစ်ခုသံအမတ်ကြီးစေသည်။ "
သူတို့အားလုံး – သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာကာသအတွင်းနှင့်မျှမတို့သံသယအခြားသူတွေ – ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ untenable အဖြစ်ယနေ့အဲဒီမှာမှဒီကနေရလမ်းမှကြွလာသည့်အခါပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုရှုမြင်, ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိပြီး – နှင့် Jetpack နဲ့ suborbital ရေယာဉ်များဘာမှသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားအယူအဆမှသေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲအောင်ထက်အန္တရာယ်များလောင်း၏ဝေးလျော့နည်းဖြစ်ကြောင်း.
Mol သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ်လည်းငါတို့ဖွယ်ရှိပင်ယနေ့ပဋိသန္ဓေ ယူ. မရနိုငျစိတ်ကူးများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုကပါဝင်ပတ်သက်ပြောပါတယ်, tomorrowwill ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နိုင်အောင်ထူးကဲဖြစ်သောကြောင့်,.
"ငါသည်လူသားထုအစဉ်အမြဲသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်ရှာဖွေဝေးတဲ့သွားကြဖို့ကြိုးစားနေသည်ထင်,"ဟုသူကဆိုသည်. "ငါသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးမျိုးစိတ်အဖြစ်မျိုးစုံဂြိုလ်ပေါ်နေထိုင်နေပါလိမ့်မယ်ဝေးသောအနာဂတ်ကာလ၌ထင်. ငါ၏ယုံကြည်စိတ်ချတယ်, ဟုတ်ကဲ့. ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တသက်တာမှာ, သော်လည်း။ "
32334	0 အန်ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း, အပိုဒ်, မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ, စီးပွားရေး, ပတ်ဝန်းကျင်, အင်္ဂါရပ်များ, နည်းပညာ, တက်စလာ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ်, ခရီးသွားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အမေရိကန်သတင်း, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← Facebook ကစမ်းသပ် Messenger ကိုအတွက် Snapchat စတိုင် Self-destructing ချက်တင် ဘယ်လိုစမတ်အိတ်လေကြောင်းခရီးသွားအသွင်ပြောင်းနိုင် →